Ibidogharịa Mindset »Sugarlove®
Agbapụtakwa shuga, mama na papa gị site na ịtugharị uche gị na ikwe ka ihe dịrịbu gị mma!
Ga - enwerịrị ebumnuche dị ọcha iji zọta onye gị na ya bi. Ya mere họrọ uzo gi site na idoghari na ịkọwaputa usoro ihe gi bu. Anya gị na uwe gị na ụlọ gị, ụgbọ ala gị na ihe ndị ọzọ ị nwere na-akpọpụta “ihe oyiyi” onye ị bụ ga-abịa na mpụga ụwa. Agbanyeghị, obi siri gị ike na “onyonyo” gị bụ naanị gị? Ka ikwesiri itinye ego na uche na nkpuru obi gi?
Yabụ kedu Organic Sugarlove®?
Organlo Sugarlove® abụghị ihe nnabata kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa na njikwa ndị ọzọ, n'ihi na ọ chọrọ ịkọwagharị Sugar Baby, Momma & Daddy.
Nke a gụnyere ịhapụ ịhapụ ihe masịrị gị, yabụ ị nwere ike ịhazigharị uche gị. N’ihi na Uche Gị, Ahụike & Mkpụrụ Obi gị bụ ihe dị mkpa ejedebeghị na onyonyo nke ndị mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ nọrọ dị ka fashionistas wdg.